Iska jir..Ogow Goobahani Google Map Laguma arki karo | Xaqiiqonews
Iska jir..Ogow Goobahani Google Map Laguma arki karo
Markii aan u baahano in aan wax ka ogaano deegaan waa iska caadi in aan caawin ka dalbano ablikeeshinka “google Map” , laakiinse waxaa jira 10 meel oo sir kuwaasi oo aan lagu arki karin xitaa khariidada “Google Map”.
Goobahani ayaa loo qariyey siyaabo kal duwan, ha noqoto sabab amni, ama sabab kale oo qarsoon.
1-Jasiiradda Moruroa ee dhacda Faransiiska
Ma cadda sababta qeyb badan oo jasiiradda ka mid ah loo saaray “Block” balse dadka qaar ayaa aaminsan in jasiiraddani tahay “jasiirad Nukliyeer” , waxaana la xasuusataa in Dowladda Faransiiska ay halkanu ku tijaabisay tijaabooyin Nukliyeer ah sanadihii 1966, iyo 1996.
2-guriga Lambarkiisu Yahay 2207 ee dhaca xaafadda Seymour Ohaayo ee Mareykanka.
Gurigani ayaa waxaa ka dhacay fal-dambiyeed intii u dhaxeysay 2002-2004, nin la oran jiray Castro ayaa gurigan ku soo afduubtay 3 gabdhood oo dhalinyarro ah halkaasi ayeyna ku xanibnaayeen ilaa sanadkii 2013, xilligaasi oo mid ka mid ah ay jaanis u heshay in ay baxsato iyadoo booliska wargelisay.
3-Guri ku yaala Stockton-on-Tees, UK..
Sababta gurigani loo qariyey ilaa hadda ma cadda
4-Xarunta Ciidamada Cirka ee Taywaan
Goobtani ma saarnno “block” laakin markii uu qofka u dhawaada waxaa dhaafaya sawirka oo ku geynata meelo kale oo fog.
5-Jasiiradda Jeannette ee Ruushka
Jasiiraddani ayaa dhacda badda Siberia waxaana jira muran wali taagan oo ku saabsan cidda iska leh jasirradan, muranka ayaana u dhaxeeya Ruushka iyo Mareykanka.
Sidoo Kale Aqri Infogaraafic Map..Alqaacidda Iyo Daacish Sida ay dunida ugu kala Baahsanyihiin
6-Goob Milatari oo Gariiga Leeyahay
Sawirka goobtan ee lagu arki karo Mapka ma ahan mid cad, sababtuna waxaa lagu sheegaa in ay la xariirto amaanka.
7-Warshad farsameeya shidaalka Nuklieerka oo Faransiisku Leeyahay
goobtani waxaa la furay sanadkii 1976
8-Xarun ay leeyihiin Ciidamada gaarka ah ee Poland
goobtani waxaa bloogay google iyaga u arka goob gaar ah.
9-goob Isbayn ku taala oo lagu magacaabo Paseo de Los Naranjos
ilaa iyo hadda ma cadda sababta goobtani loo qariyey
10-Jsaiiradda “aan la arkin” ama Jasiiradda “Wahmiga”.
Jasiiraddani ayaa lagu magacaabaa “Sandy” waxa ayna raacsantahay Faransiiska, waaxana laga waayey Mapka sanadkii 1979